Kwenzekani ekuphakeleni okungalingani kwesikrini esidlidlizayo | Haiside
You are here: Home / Izindaba / Uncategorized @zu / Kwenzekani ekuphakeleni okungalingani kwesikrini esidlidlizayo? Thinta...
2021-07-19 /in Uncategorized @zu /by admin
Lapho usebenzisa isikrini esidlidlizelayo ukukhombisa izinto zokwakha, siye saxwayisa abasebenzisi nabangane kaningi ukuthi ukuphakela kufanele kufane. Abasebenzisi abaningi nabangane bangahle bangavumelani, becabanga ukuthi noma ngabe iyiphi indlela yokondla, okokusebenza kuzongena empahleni, ngakho-ke siyiziba inkinga yokondla. Umqondo empeleni awulungile. Ukufana kokondla kunomthelela omkhulu emsebenzini wokuhlola wesikrini esidlidlizayo. Kwenzekani ekuphakeleni okungalingani kwesikrini esidlidlizayo? Okulandelayo, umhleli we-Hiside uzokhuluma nawo wonke umuntu ngomthelela wokuphakelwa okungalingani.
Umthelela wokuphakelwa okungalingani kwesikrini esidlidlizayo
1.Thinta impilo yesevisi yesikrini
Uma isikrini esidlidlizayo sondliwa ngokungalingani, isikrini sizolimala ngokushesha futhi sinciphise impilo yesevisi yesikrini. Ngoba uma ukuphakelwa kungalingani, kungahle kube nokuningi kakhulu ngasikhathi sinye, okuzodlula ingcindezi yokusebenza isikrini esingamelana nayo, futhi nesikrini sizolinganiswa ngenxa yesisindo sezinto eziningi kakhulu, ezizodala Isibuko indawo yonakele ngokushesha.
2. Thinta okukhiphayo nokunemba
Ukuphakelwa okungalingani kwesikrini esidlidlizelayo kuzophinda kuthinte umphumela wokukhishwa nokuhlolwa kokuhlola, nakho okudalwa umphumela wangaphambilini. Ngenxa yokuthi isikrini sonakele, isikrini kufanele sithathelwe indawo, nakho okuthinta umphumela wokukhishwa nokuhlolwa kwesikrini. Uma lokhu kwenzeka isikhathi eside, ngeke kuthinte kuphela ukukhiqizwa okujwayelekile kepha futhi kuzokhuphula nezindleko zokugcinwa kwemishini.
Esinye isici esithinta ukukhishwa nokunemba kubonakala kokuthi lapho ukuphakelwa kungalingani, kuzoba nesimanga sokuthi kukhona okubalulekile kolunye uhlangothi lwesikrini futhi olunye uhlangothi alunjalo. Lokhu kuzonciphisa isilinganiso sokusetshenziswa kwendawo yonke yesikrini futhi kubangele ukuthi okukhiphayo kwehluleke ukuhlangabezana nezidingo. . Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yokondliwa okungalingani, kuzoba yinkinga yokuqongelela ngokweqile kwezinto ngakolunye uhlangothi. Lapho ukunqwabelana kwezinto kukhulu kakhulu, kuzothinta ukunemba kokukhipha nokukhiphayo.
3. Kuthinta impilo yenkonzo yemoto
Lapho kusetshenziswa isikrini sokudlidliza, ukuphakelwa okungalingani noma ukondla ngokweqile ngasikhathi sinye kunqubo yokukhiqiza kuzokwandisa umthwalo wesikrini nomthwalo wemoto, ozolimaza isidlidlizi futhi unciphise impilo yenkonzo yemoto. Abasebenzisi kudingeka ukuthi baqhubeke nokugcina noma ukufaka amanye ama-motors ukwandisa izindleko zokulungiswa kwemishini.
4. Thinta ukusebenza kahle kokuhlolwa
Uma usebenzisa isikrini esidlidlizayo, ukuphakelwa okungalingani kuzophinde kuthinte ukusebenza kahle kokuhlola. Uma izinto eziningi kakhulu zondliwa ngasikhathi, umthwalo wokuhlola ongathwalwa yisikrini esidlidlizelayo uzokweqiwa, kubangele ukuthi okokusebenza kukhishwe echwebeni lokukhipha ngaphambi kokuba kutholakale isikhathi sokuhlolwa, okuholele ekudleni ngokweqile. Impahla eningi kakhulu ikhishwa ethekwini lezinto ezihhadlile, okuzonciphisa kakhulu ukusebenza kahle kokuhlolwa.
Indlela yokondla ngomfaniswano wesikrini sokudlidliza
1. Okokuqala, khetha isikrini esithembekile lapho ukhetha isikrini esidlidlizayo.
2. Rhoqo hlola ukungezwani kobuso besikrini bese uhlola ukuthi isikrini sihlanganisiwe yini.
3. Uma kunamandla amakhulu omthelela, i-hopper noma i-buffer ingangezwa esikrinini esidlidlizayo.
4. Uma kunokuqoqeka kwezinto ezibonakalayo, thola isizathu ngokushesha okukhulu, njengokulungisa ibhulokhi eccentric yemoto yokudlidliza.
5. Funda ngokucophelela imanuwali yemiyalo yesikrini sokudlidliza se-ultrasonic, bese upha okokusebenza ngokuqinile ngokwamandla okucubungula kwesikrini. Uma udinga ukwandisa umthamo wokukhiqiza, ungathola umkhiqizi wesikrini odlidlizelayo ukuze uqhubeke uguqule umshini wesikrini.
6. Ukusetshenziswa kohlelo lokuphakela okuzenzakalelayo, okungukuthi, ukondla okuvunguza noma ukuphakamisa ibhakede, amabhande nezinye izinsimbi zokuphakamisa nokudlulisa ukondla okuzenzakalelayo, akugcini nje ngokuxazulula imiphumela yokudla okungalingani, kodwa futhi kuthuthukisa nezindleko zomhlangano wokusebenzela.
Izinyathelo zokuphepha zokudla kwesikrini
1. Gwema ukuzondla kakhulu ngesikhathi esisodwa
Lapho wondla isikrini esidlidlizelayo, kufanele kuthathwe ukunakekelwa ukugwema ukondla ngokweqile ngasikhathi sinye. Inani elikhulu lokondliwa kwesikhathi esisodwa elidlula umthamo ophethe wesikrini lizobangela ukuthi isikrini sikhathale futhi sikhululeke, futhi lilimaze kabi isikrini futhi lithinte umphumela wokuhlola. Lapho isikrini esidlidlizayo sithunyelwa sisuka efektri, imoto yokudlidliza nesikrini kufaniswa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi. Isibonelo, ukondla ngesikhathi esisodwa kuzokhulisa umthwalo wemoto eshukunyiswa futhi kunciphise impilo yemoto edlidlizayo. Ukusebenza kokuhlolwa kwesikrini nakho kuzoncishiswa kakhulu.
2. Gwema umthelela omkhulu lapho udla
Gwema umthelela omkhulu lapho udla. Lokhu futhi yilokho isikrini esidlidlizelayo okufanele sikunake lapho sondla. Amandla omthelela wokuphakelwa kwesikhathi esisodwa azothinta kakhulu ukungezwani kwesikrini, futhi ukukhululeka kwesikrini kuzothinta ukusebenza kahle kokuhlolwa. Ngokuqhathaniswa, kuzokuthinta ngokungathi sína impilo yepuleti lesikrini. Kunconywa ukuxhumana ngokucacile nomenzi wesikrini odlidlizayo lapho u-oda isikrini esidlidlizayo. I-buffer hopper ingafakwa uma amandla omthelela wokuphakelayo emakhulu.
Lokhu okungenhla kuyimpendulo mayelana nokondliwa okungalingani kwesikrini esidlidlizayo. Kungabonakala ukuthi ukuphakelwa okungalingani kuzothinta impilo yesevisi yesikrini esidlidlizelayo, kubangele ukulimala okusheshayo esikrinini, nakho okunciphisa ukukhishwa nokuhlolwa kokunemba, futhi kuthinte impilo yesevisi yemoto. Thinta ukusebenza kahle kokuhlolwa. Le miphumela izokhuphula izindleko zokugcinwa kwemishini, engakulungele ukukhiqizwa okuzinzile. Ngakho-ke, ukondla umfaniswano kubaluleke kakhulu. Lapho wondla, kuyadingeka ukugwema ukutshalwa kwezimali ngokweqile noma umthelela omkhulu ngasikhathi sinye. Uma udinga imishini yesikrini esezingeni eliphezulu, sicela uxhumane ne-HiSide ukuthola imininingwane egcwele ~
Ungayelula kanjani impilo yesevisi yesikrini esidlidlizayo? Izinyathelo zokufaka, ukulungisa iphutha nokuqapha kwe-vibrator screen exci...